राहात नपाएपछि झापा गाउँपालिकामा जनता आन्दोलित – झुल्केघाम
कार्तिक १२ १२:४६ ३४२
कुमरखोद, कार्तिक १२। झापा गाउँपलिका वडा १ र २ का जनताहरु आफुले राहात नपाएको भन्दै वडा कार्यालय परिसर भित्र आन्दोलित भएका छन् । जसले राहत पाउनुपर्ने हो उसले नपाएको तर अन्य घर परिवारका सबैले पाएको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन्। सयौंको संख्यामा विहिवार विहान देखी आएका मानिसहरु दिनभरि भोक भोकै वसेर वडा अध्यक्ष सामु गुनासो पोखिरहेको थिए। हामीहरुलाई पनि राहात उपलब्ध गराईदिनु पर्यो भन्दै वडा १ र २ का मानिसहरु वडा अध्यक्षको कार्यकक्षमै हुलका हुल प्रवेश गरेका थिए । कतिपय मानिसहरुले भन्दै थिए सवै राहत काँग्रेसको मान्छे मात्र पाए फेरी कसैले भन्दै थियो सवै राहत एमालेको मान्छेले मात्रै पाए । वास्तविकता खास गरेर कुन क्षेत्रको मानिसले राहत पाउनु पर्ने कसैलाई थाहा नै छैन । हो–हल्ला गरेर जनतालाई उचालेर आफुलाई जनता सामु हिरो वन्ने दाउँमा राजनीति गर्ने व्यक्तिहरु जताततै छरपस्ट देखिन्थ्यो ।
वास्तविक कसको लागि राहत आएको हो ?
अन्तराष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा विश्व खाध्य कार्यक्रम अन्तर्गत झापा जिल्लाको माई नदीको छेउछाउको तटिय क्षेत्रमा वसोवास गर्ने वा मौसम पुर्व अनुमान आधारित अग्रिम विपत कार्यक्रम अन्तर्गत वसोवास गर्ने मानिसहरुको लागि उक्त राहत रकम आएको जिल्ला रेडक्रस शाखाका सभापति लोकराज ढकालले वताए । सभापति ढकालले भने झापा जिल्लाको माई नदीको वारीपारी ४ वटा पालिकाहरु पाएका छन् । गौंरीगंज गाउँपालिका , शिवसतासी नगरपालिका , कन्काई नगरपालिका र झापा गाउँपालिका गरी जम्मा १ हजार ६ सय पैसठी घरधुरीले तेह्रहजार पाँचसयका दरले राहात उपलब्ध गरेका वताए ।
झापा गापा जनताको माग
नामावली सार्वजनिक नगरेकोले आ -आफ्नो मान्छेलाई मात्र राहात वितरण गरेकोले आन्दोलित झापा गाउँपालिका वडा नं १ र २ वासीको अन्त्यमा एउटै माग रहेको छ । कुन कुन व्यक्तिले राहात पाए त उनीहरुमा नाम सार्वजनिक गरियोस ।
झापा गापामा कति घर धुरीले राहत पाए त ?
विश्व खाध्य कार्यक्रम अन्र्तगत रेडक्रस झापा शाखाको सहयोगमा झापा गापामा ६७२ घरधुरीले राहात पाएका छन् । वडा १ मा २६८ घर , वडा २ मा २२३ घर , वडा ३ मा ८६ घर र वडा ७ मा १२५ घरधुरीले तेह्रहजार पाँचसयको दरले राहात पाएको कुमरखोद उपशाखा सभापति सुन्दरलाल गणेशले वताए ।